kitapo plastika taratasy
kaontenera azo atsipy
kaopy kafe taratasy
vokatra PLA taratasy
Tsenan'ny fonosana famonosana anjakan'ny fanavaozana
Eo amin'ny tontolon'ny famatarana sy ny vokatra fonosana, ny famoronana sy ny fandrosoana dia mitarika hatrany amin'ny fanavaozana vaovao. Ny sasany amin'ireo fironana farany dia efa nitondra ny tsena tamin'ny tafiotra ary manova ny fomba fanatonan'ireo orinasa ny famonosana sy ny fizotran'ny fandefasana azy ireo. Marihina ...
Aza manary, tsy te: firy ny fako fonosana be loatra?
Ilaina ny fonosana: alao an-tsaina fotsiny izao tontolo izao tsy misy an'io. Nisy foana ny karazana fonosana ary hisy foana, saingy misy fomba ve hampijanonantsika ny habetsahan'ny fandotoana sy ny fako vokarina amin'ireo filan'ny fiainana ireo? Aiza no soritsoritanay amin'ny fanekena hanaiky ny ...
Fonosana compostable: fandraisana andraikitra amin'ny tsena ho avy
Ny fanovana fonosana dia nitombo hatrany hatrany ary nitarika fanamafisana vaovao tanteraka amin'ny tsena ankapobeny, indrindra fa ny orinasa miasa mba hahatonga ny fonosany ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana. Vokatra iray izay nivoaka avy amin'izany dia ny fifantohana vaovao amin'ny fonosana azo zezika, amin'ny fiezahana hampiseho fa comp ...
Adress: No. 5051, Shengli East Str, Distrikan'i Kuiwen, Weifang City, Shandong Pro, Sina
Tsenan'ny fonosana fonosana anjakan'i ...
Aza mandany, tsy te: Ohatrinona ny fonosana ...